Germany | Somaliska
Dowlada Jermalka ayaa soo saarty go’aan ay si weyn uga caroodeen wadamado badan oo ay ku jidho Sweden. Iyadoo wadamadaas ay ku hanjabeen in ay dowlada Germany horgeyn doonaan maxkamada Yurub. Jermalka ayaa ku...
Madaxda guud ahaan wadamada Midowga Yurub (EU) iyo raysal wasaaraha Turkiga Ahmet Davutoglu ayaa xalay shaqdii dhexe heshiis ku gaaray magaalada Brussels. Heshiiskaan ayaa ah mid si weyn saameyn uga yeelanaya qaxootiga soo galaya...
Baaritaan cusub oo la soo saaray ayaa muujinaya baasaboorada aduunka ugu qiimaha badan iyo kuwa ugu liita. Baaritaankaan oo ay samaysay shirkada Henley & Partners ayaa waxaa kaalinta 1-aad galay baasaboorka Germany oo 177 wadan...
Baaritaanka lagu sameeyay heerka nolosha, dhaqaalaha iyo xoriyada wadamo gaaraya 60 wadan ee ugu horumarsan caalamka ayaa dhawaan la soo bandhigay, iyadoo uu kaalinta 1-aad galay wadanka Germany. Kaalinta 2-aad ayaa waxaa galay wadanka...
Wargeyska Expressen ayaa soo bandhigay macluumaad muujinaya in Booliska Sweden ay shacabka ka qariyeen dhacdooyin foolxun oo dhalinyaro soo galooti ah ay kula keceen gabdho Swedish ah xili ay socotay xaflad musik. Arintaan ayaa...
Maalmihii la soo dhaafay waxaa cirka isku shareertay tirada qaxootiga ee lugta iyo badda ku soo galaya Midowga Yurub. Kumanaan qof ayaa ka soo talaabtay xuduuda wadanka Serbia kuwaasoo u soo gudbay Hungary kuna...
Xisbiyada cunsuriyiinta ah ee ka dhisan wadamada Midowga Yurub (EU) ayaa si weyn guul uga gaaray doorashadii baarlamaanka Yurub ee shalay ka dhacday 28-da wadan ee ka tirsan EU-da. Wadamada qaarkood ayaa xisbiyada cunsuriyiinta...
Wasiirka qaxootiga ee wadanka Holland, Fred Teeven oo isniintii la hadlay baarlamaanka Holland, ayaa sheegay in amaanka caasimadda Soomaaliya, Muqdisho uu soo hagaagay oo hada dib loogu celin karo dadka daganaashiyaha Holland loo diido....
Caawa waxaa ciyaar kulul dhex mari doontaa xulka qaranka ee wadamada Sweden iyo Germany. Ciyaartaan oo ka mid ah isreereebka qaramada ee koobka aduunka 2014 ayaa Sweden waxay foodi isdari doonaan Germany oo aan...
Maxkamad Sare oo ku taala dalka Jermalka ayaa xukuntay in qofku uu diidi karo qeyb ka mid ah shaqadiisa haddii ay ka hor imaaneyso diintiisa, arintaan ayaa timid ka dib marii nin Muslima oo...